Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha Ayaa Ku Dhaawacmay Virus-ka Van RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari65 VanGawaarida Gaadiidka Dadweynaha Ayaa Ku Dhaawacmay Virus-ka Van
26 / 02 / 2020 65 Van, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Gawaarida dadweynaha ee Van ayaa laga daawan karaa fayraska
Gawaarida dadweynaha ee qaada kumanaan kun oo muwaadiniin ah maalin walba oo ku sugan Van ayaa loo jeermiyaa si looga hortago suurogalka suurogalka in ay dhici karto, infekshinka fayraska iyo cudurada faafa.
In kasta oo ay socdaan dadaallada lagula dagaallamayo faafitaanka cudurka 'corona virus virus', oo asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha kuna hanjabaya adduunka, ayaa wali sii wada taxadarradooda oo laga fuliyaa waddankeenna oo aan cudur ka dillaacin. Xaaladda guud, Dowladda Hoose ee Magaalada Caabudwaaq waxay si joogto ah uga shaqeyneysaa wasakhda iyo wasakhda baabuurta gaadiidka dadweynaha iyo aagagga la wadaago. Kooxahan xiriirka la leh Waaxda Caafimaadka ee Caafimaadka ayaa sii waday dadaalkooda kahortaga jeermiska, kuwaas oo isugu jira bartamaha magaalada iyo 13 degmo. Basaska degmada, basaska dadweynaha iyo basaska, kuwaas oo bixiya adeegyada gaadiidka dadweynaha, ayaa midba mid loogu saydhaa. Shaqada nadiifinta ka dib, kooxuhu waxay xidheen dhar gaar ah, waxay ka hortageen cudurada faafa iyo fayraska, gaar ahaan fayraska corona, oo leh walxo gaar ah.